RASMI: Xidiga Cusub Ee Chelsea Ee Hakim Ziyech Oo Markii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaystay Abaal Marintiisii Ajax Ugu Danbaysay. - Gool24.Net
RASMI: Xidiga Cusub Ee Chelsea Ee Hakim Ziyech Oo Markii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Ku Guulaystay Abaal Marintiisii Ajax Ugu Danbaysay.
May 15, 2020 Mahamoud Batalaale
Xidiga dhawaan Chelsea ku soo biiri doona ee Hakim Ziyech ayaa ku guulaystay abaal marintiisii ugu danbaysay ee kooxda Ajax kadib markii la kansalay xili ciyaareedka horyaalka Netherlands.
Horyaalka Holland waxaa xili ciyaareedkiisa laga dhigay waxba kama jiraan taas oo la micno ah in ayna jiri doonin koox koobka kuulaysanaysa halka kooxihii heerka labaad u dhici lahaa ay isla horyaalka heerka kowaad ku sii nagaan doonaan.
Laakiin kooxda Ajax ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xidiga ay Chelsea ka iibisay ee Hakim Ziyech uu xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah uu ku guulaysatay abaal marinta laacibka kooxdeeda ugu fiican.
Hakim Ziyech ayaa markii ugu danbaysay ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee kooxdiisa Ajax maadaama oo uu kooxda Chelsea u soo wareegi doono marka la soo gaadho bisha June 30 markaas oo uu heshiiskiisa Ajax dhamaan doono.
Laakiin Hakim Ziyech ayay Chelsea si rasmi ah kooxdeeda uga diwaan gashan kartaa July 1 markaas oo uu suuqa xagaagu si rasmi ah u furmi doono haddii samaynta xili ciyaareedka soo daahay aanu dib u riixin.
Hakim Ziyech ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Ajax wuxuuna saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay uu ku soo guulaystay abaal marinta ciyaartoyga Ajax ugu fiican taas oo muujinaysa tayada uu Blues ku soo kordhin doono.
Chelsea hore ayay u soo aragtay tayada Hakim Ziyech kadib markii uu ceebeeyay goolhaye Kepa intii lagu jiray kulamadii Champions league balse markan waxa uu soo qaatay abaal marintiisii ugu danbaysay ee Ajax.
Frank Lampard ayaa si wayn ugu xisaabtami doona adeega Hakim Ziyech xili ciyaareedka soo socda markaas oo ay Blues doonayso in ay dib u habayn wayn kooxdeeda ku sii samayn doonto suuqa xagaaga.
Si kastaba ha ahaatee, in Hakim Ziyech uu hadda markii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee Ajax ugu fiican waxay muujinaysaa sida uu qaab ciyaareedkiisu joogto u soo ahaa.